Qoysas ku soo barakacay Garoowe oo dhul loogu deeqay
Photo | Haween ka tirsan dadka soo barakacay ee la deegaameynayo/Cabdiraxmaan Xaaji/Ergo
Mohamed Shariff 08 January, 2016 GAROWE
(ERGO) - Qoysas soo barakacay oo ay tiradooda gaarayso 2200 oo ku nool xeryaha Jowle ee magaalada Garoowe ayaa toddobaadkii hore loo sharciyeeyay milkiyadda dhul uu cabbirkiisu yahay 1 km oo la dejin doono. Tallaabadaas ayaa qeyb ka ah mashruuc uu maamulka Puntland ku deegaameynayo dadka soo barakacay.
Dhulka oo ah mid bannaan oo dhinaca bari Garoowe ka xiga 6 km waxaa ku deeqay dadka deegaanka. Marka la dhiso kaddib waxaa qoys kasta qeyb loo siin doonaa meel uu dego. Wasiir ku-xigeenka Arrimaha Gudaha ee maamulka Puntland, Cabdullaahi Xaashi ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in qoysaska sida ay u kala badan yihiin tiro ahaan ama ay u kala duruufo badan yihiin ay u kala hormarin doonaan.
Wasiirka ayaa tilmaamay in mashruuca deegaameynta oo ay u bixiyeen ‘Xalka Waara’, ay iska kaashanayaan shacabka, maamulka iyo hay’adaha daneeya wax u qabashada dadka soo barakacay. “Ujeeddada mashruuca waa in uu qofku helo guri uu milkiyaddiisa leeyahay oo ku yaalla meel koronto, biyo, waxbarasho iyo adeegyo caafimaad leh,” ayuu yiri wasiirka.
Cismaan Abuukar oo horjooge u ah xerada Jowle 2 ayaa ka mid ah mas’uuliyiinta lagu wareejiyay dukumiintiyada dhulka. Wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay inuu rajeynayo qoys kasta in uu qeyb u heli doono labo qol iyo wixii ka badan. Hay’adaha samafalka ayuu ka codsaday inay dedejiyaan dhismaha.
Qoysaska soo barakacay oo intooda badan ka yimid gobollada Koonfurta Soomaaliya, shantii sano sano ee la soo dhaafayna ku noolaa Garoowe ayaa hadda deggan aqallo cooshado iyo jiingado ka sameysan, oo ay sheegeen inay ciriiri ku yihiin, dabeylaha iyo roobkana aanay ka celin karin. Xeryaha ay ku nool yihiin nadaafaddooda way liidataa, mana laha musqulo iyo biyo ku filan.
Guddi ka kooban hay’ado caalami ah ayaa horay uga shaqeeyay mashaariic lagu deegaameynayo dadka ku barakacay deegaannada Puntaland. Sanadkii 2013 ayaa 600 oo qoys la dejiyay dhul la siiyay oo magaalada u jira 6 km. Qoysaskaas hadda waa dad deegaan ah oo ku dhex milmay shacabka Garoowe.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa sheegtay inuu qorshahan yahay mid sii socon doona ilaa dadka soo barakacay ee doonaya inay deegaan noqdaan la dejinayo dhul ay iyaga leeyihiin. Labadii sano ee la soo dhaafay in ka badan 10,000 oo qoys ayaa dib-u-dejin loogu sameeyay magaalooyinka Gaalkacyo, Burtinle, Qardho, Boosaaso iyo Garoowe.
(Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji/AT)